Chris Harrison Net Worth & Ihe Onye Nleta ‘Bachelor’ na-eme kwa oge - Ozi
Anyị na-agbaji Chris Woris Net Net (gụnyere nke ọ na-eme kwa oge 'Bachelor' Episode)
We Re Breaking Down Chris Harrison S Net Worth
Enweghị agọnahụ ya- Chris Harrison nwere ike, n'eziokwu, nwere ọrụ kachasị ukwuu n'ụwa.
Bachelor na Bachelorette (Ọzọ A ) Agaghị abụ ihe ngosi na-aga nke ọma ha bụ taa na-enweghị Harrison, onye nwe ụlọ nke nọ n'isi nke eziokwu telivishọn ikike kemgbe ọ malitere laa azụ na 2002.
Ka oge Peter Weber na-agbada, ọ mere n'ezie ka anyị chee: Gịnị bụ ụgbụ Chris Harrison? Mgbe ọ gachara mmiri miri emi, ọ dị ka afọ 48 ọ bara uru n'etiti $ 12 na $ 16. Gụọ maka ihe niile anyị maara, gụnyere ego ole ọ na-eme kwa Bachelor nwunye.
Akwukwo nke Chris Harrison kesara (@chrisbharrison) na Feb 10, 2020 na 1:21 pm PST
1. ‘Bachelor’ Franchise
Ọ bụ ezie na onye ọrụ ahụ na-arụ ọrụ na telivishọn kemgbe ụbọchị kọleji ya, enweghị obi abụọ ọ bụla na ọrụ ya mere n'ezie mgbe ọ sonyere aha mkpakọrịta nwoke na nwanyị. Ma na-eche na ọ bụ akụkụ nke ihe niile Bachelor ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20, ọ bụghị ihe ijuanya na ọ bụ ebe ahụ ka ọtụtụ n'ime akụ ya dị egwu si abịa. Dabere na Yahoo! Ego , ka Nduzi TV edemede site na 2011 kwuru atụmatụ ụgwọ ọnwa Harrison ịbụ ihe ruru $ 60,000 kwa otu. Anyị ji anyị kpọrọ ihe.
Iji were ya gaa n'ihu, Nwa 25 gbakọọ na na 2017, Harrison nọrọ na 13 ngosipụta nke Bachelor , Ngosipụta 11 nke Ndị Bachelorette na usoro 10 nke Bachelor Na Paradaịs , na-akwụ ụgwọ ya maka afọ ọ dịkarịa ala $ 2.
Foto nke Rodin Eckenroth / Getty
2. Ọzọ Gigs Bochum
Mana ịgwa anyị na ọ bụ oge kachasị dị egwu mana ọ bụghị naanị otu ụzọ Harrison si enweta ego ya. Ọ na-kwadoro Miss America Pageant ugboro ole na ole, ma weghara Whonye chọrọ ịbụ onye nde mmadụ? na 2015. Ghara ikwu, ọ nọrọ oge ụfọdụ na ndị ọzọ na eziokwu na-egosi ( ikuru ume! ), gụnyere Hollywood 411 na HGTV throwback kpochapụwo, Llema Aka Onye Okike .
Akwukwo nke Chris Harrison kesara (@chrisbharrison) na May 1, 2015 na 7:22 am PDT
3. O bukwa onye ode akwukwo
Oh, na anyị kwuru na ọ bụkwa onye edemede? Yup, nna nke abụọ bipụtara akwụkwọ akụkọ ịhụnanya ya, Akwụkwọ ozi zuru oke , na 2016. Olee dabara adaba.
Ọfọn, n'ebe ahụ ị nwere ya. Nwoke ahụ na-akwụ ezigbo ụgwọ nnukwu ego.
Gbasara : Chris Harrison na-ekpughe ihe kpatara na ‘Bachelor’ Fantasy Suite Twist na-enwetụbeghị ụdị ya
okpueze oge 2 nwunye 1
meghan markle n'ịdị elu
dochie anya ntu ntu
n'ihu ịkpụ ntutu maka ụmụ agbọghọ India
n'elu romance fim Hollywood
efe aghụghọ maka obere ara